10 Sababood oo bartaadu u luminayso Darajeynta Noolaha ... Iyo Waxa La Sameeyo | Martech Zone
Waxaa jira sababo dhowr ah oo websaydhkaagu u lumin karo aragtida raadinta dabiiciga ah.
U guurista degmo cusub - In kasta oo Google ay siiso qaab ay ku ogaysiin karaan inaad u guurtay degel cusub adoo adeegsanaya Raadinta Console, weli waxaa jira arrinta ah in la hubiyo dib-u-xiriir kasta oo halkaas ka jira inuu xalliyo URL wanaagsan oo ku saabsan boggaaga cusub halkii laga heli lahaa (404) bog .
Oggolaanshaha rukhsadaha - Waxaan soo arkay dhacdooyin badan oo dad ah oo ku rakibaya mawduucyo cusub, waxyaabo dheeri ah, ama samaynaya isbeddelo kale oo CMS ah oo si kama 'ah u beddelaya dejintooda kana horjoogsanaya boggooda inay si buuxda u gurguurtaan.
Metadata xun - Mashiinnada raadinta ayaa jecel metadata sida cinwaannada iyo sharaxaadaha bogga. Had iyo jeer waxaan helaa arrimo halka calaamadaha cinwaanka, astaamaha cinwaanka meta, sharraxaadda aan si sax ah loo degganeyn oo mashiinka raadinta uu u arko bogag aan xad lahayn… marka waxay kaliya tilmaamayaan qaar iyaga ka mid ah.
Ka jawaab celinta mobilada - Moobilku wuxuu xukumaa codsiyo badan oo raadinta dabiici ah, sidaa darteed degel aan fiicnayn ayaa runtii xanuunsan kara. Ku darida awooda AMP bartaada sidoo kale waxay si weyn u wanaajin kartaa awoodaada laga heli karo raadinta moobiilka. Mashiinnada raadinta waxay sidoo kale hagaajinayaan qeexitaankooda jawaabta moobiilka madaama moobiillada moobiilku is beddeleen.
Beddel qaab dhismeedka bogga - Cunsurrada ku jira bogga loogu talagalay SEO-ga waa heer aad u heer sarreeya muhiimaddooda - laga soo bilaabo cinwaanka cinwaanada, geesinimada / xoojinta, warbaahinta iyo astaamaha alt… haddii aad beddesho qaab dhismeedka boggaaga oo aad dib u habayn ku samayso sida ay u kala mudan yihiin, waxay beddeli doontaa sida gurguuraha u arko waxa ku jira waxaadna waayi kartaa darajaynta boggaas. Mashiinnada raadinta ayaa sidoo kale wax ka beddeli kara muhiimadda ay leeyihiin waxyaalaha bogga ku jira.
Isbeddel caan ah - Mararka qaar, degel leh tan awood maamul ayaa joojinaya inay kugula xiriiraan maxaa yeelay waxay dib u habeyn ku sameeyeen boggooda oo ay uga tageen maqaalka kugu saabsan. Miyaad xisaab hubin ku sameysay yaa kugu qiimeeya oo ma aragtay wax isbeddel ah?
Kordhinta tartanka - Tartamayaashaadu waxay sameyn karaan warka waxayna helayaan tan gadaal-gadaal ah oo kor u qaadaya darajadooda. Ma jiraan wax aad ka qaban kartid tan illaa kor u kaca ama aad kor u qaaddo kor u qaadista waxyaabahaaga.
Keyword Isbeddellada - Miyaad hubisay Google Trends si aad u aragto sida raadintu ugu socoto mowduucyada aad darajaynaysay? Mise ereybixinta dhabta ah? Tusaale ahaan, haddii degelkeygu ka hadlay casriga ah markasta, waxaa laga yaabaa inaan rabo inaan cusbooneysiiyo ereygaas telefoonka gacanta maadaama taasi ay tahay ereyga ugu weyn ee maalmahan la isticmaalo. Waxa kale oo laga yaabaa inaan rabo inaan ku fiirsado isbeddellada xilligan halkan oo aan hubiyo in istiraatiijiyaddayda ku jirta ay ka sii horreyso isbeddellada raadinta.
Is-Sabotage - Waad la yaabi doontaa inta jeer ee bogaggaagu ay kula tartamayaan naftooda mashiinnada raadinta. Haddii aad isku dayeyso inaad ku qorto boostada blog bil kasta isla mowduucaas, waxaad hadda ku faafineysaa awooddaada iyo gadaal xiriiriyahaaga bogagga 12 dhammaadka sanadka. Hubso inaad baarto, naqshadeyso, oo aad qorto hal bog halkii mawduuc diiradda - ka dibna sii cusbooneysii boggaas. Waxaan ka soo qaadnay bogag kumanaan bog ah illaa boqolaal bog - oo si habsami leh ugu wareejinay dhagaystayaasha - waxaanna daawannay taraafikada ay ku jiraan ee dabiiciga ah.
Ka Digtoonow Kheyraadkaaga Darajeynta Noolaha
Tirada dadka ee aan haysto ee codsadey in laga caawiyo arrintan ayaa ah mid laga naxo. Si looga sii daro, waxay badiyaa tilmaamaan barxad ama wakaaladooda SEO waxayna la halgamayaan xaqiiqda ah in ilahaasi aysan saadaalin arrinta mana aysan awoodin inay ka caawiyaan sixitaanka arrinta.
Qalabka SEO - Waxaa jira qasacadado aad u tiro badan Qalabka SEO taas oo aan ilaa hadda la hayn. Si fudud uma isticmaalo qalab wax warbixineed si ay iigu sheegto waxa qaldan - Waan guurguuraa goobta, waxaan ku dhex muquurtaa koodhka, kormeer goob kasta, dib u eegis ku samee tartanka, ka dibna waxaan la imaadaa khariidad ku saabsan sida loo horumariyo. Google xitaa kuma hayn karo Search Console kahor isbadalkooda algorithm… jooji inaad ka fikirto aalad qaar inay sameyn doonto!
Wakaaladaha SEO - Waan ka daalay wakaaladaha SEO iyo la taliyayaasha. Xaqiiqdii, xitaa uma kala sooco nafteyda lataliye SEO ah. Intii aan boqolaal shirkadood ka caawiyey arrimahan sanadihii la soo dhaafay, waan ku guuleystey maxaa yeelay diiradda kama saarayo isbeddelada algorithm iyo dib-u-xiriirinta… Waxaan diiradda saarayaa khibrada martidaada iyo yoolalka ururkaaga. Haddii aad isku daydo inaad ciyaartid algorithms, ma garaaci doontid kumanaan ka mid ah horumariyeyaasha Google iyo awoodda xisaabinta ballaaran ee ay leeyihiin… i aamin. Hay'ado badan oo SEO ah ayaa jira oo ka dhisan nidaamyo waqtigoodu dhammaaday iyo algorithms-ka ciyaaraha - oo kaliya ma shaqeynayaan - waxay dhaawici doonaan hay'addaada raadinta muddada dheer. Hay'ad kasta oo aan fahmin iibkaaga iyo istiraatiijiyadda suuqgeynta ayaan kaa caawin doonin istiraatiijiyaddaada SEO.
Hal qoraal oo ku saabsan tan - haddii aad isku dayeyso inaad xiirto xoogaa lacag ah oo ka mid ah aaladdaada ama miisaaniyadda lataliyaha… waxaad helaysaa sida saxda ah ee aad bixiso. La-taliye weyn ayaa kaa caawin kara inaad waddo taraafikada dabiiciga ah, dejiso himilooyin macquul ah, ku siiso talo-bixin xagga suuq-geynta ah oo ka baxsan mashiinka raadinta, oo kaa caawin kara inaad dib ugu soo laabato maalgashigaaga. Kheyraad raqiis ah waxay u badan tahay inuu dhaawici doono qiimeyntaada oo uu lacagta qaadan doono oo uu socon doono.
Sida Loo Kordhiyo Qiimeyntaada Noolaha ah
Kaabayaasha - Hubso in boggaagu aanu lahayn wax arrimo ah oo ka hortagaya mashiinnada raadinta inay si habboon u kala-caddeeyaan. Tan macnaheedu waa hagaajinta nidaamka maareynta maadadaada - oo ay ku jiraan faylka robots.txt, khariidadda bogga, waxqabadka bogga, cinwaannada cinwaanka, metadata, qaab dhismeedka bogga, jawaabta moobiilka, iwm. ha ku dhaawaco adiga oo aan kuu fududeynin inaad gurguurto, tusmeyso, oo aad u qiimeyso waxyaabahaaga si habboon.
Istaraatiijiyada Mawduuca - Cilmi-baarista, abaabulka, iyo tayada waxyaabaha aad ka kooban tahay ayaa muhiim ah. Toban sano ka hor, waxaan ku wacdiyi jiray soo noqnoqoshada iyo soo noqnoqoshada waxyaabaha si aan u soo saaro qiimeyn wanaagsan. Hadda, waxaan kugula talinayaa taas waxaanan ku adkeysanayaa in macaamiisha ay dhisaan a maktabadda taasi waa mid dhameystiran, waxay kujirtaa warbaahinta, waana sahlan tahay in la maro. Waqtiga badan ee lagu maalgeliyay adiga cilmi-baarista muhiimka ah, cilmi baaris tartan, khibrada isticmaalaha, iyo awooda ay u leeyihiin inay helaan macluumaadka ay raadinayaan, sida ugu wanaagsan ee ay ku jirto ayaa loo isticmaali doonaa loona wadaagi doonaa. Taasi, markaa, waxay wadi doontaa taraafikada dabiiciga ah ee dheeri ah. Waxaa laga yaabaa inaad haysato dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay, laakiin haddii uusan si wanaagsan u abaabulin, waxaad dhaawici kartaa qiimeynta mashiinka raadinta ee adiga kuu gaar ah.
Istaraatiijiyad dalacsiin ah - Dhisida goob aad u fiican iyo waxyaabo la yaab leh kuma filna… waa inaad lahaataa istiraatiijiyad dallacsiin ah oo dib ugu celineysa xiriiriyeyaasha bartaada si mashiinnada raadinta ay kuugu sarreeyaan adiga. Tani waxay u baahan tahay cilmi baaris si loo ogaado sida ay tartamayaashaadu u kala sarreeyaan, haddii aad u soo jiidan karto agabyadaas, iyo haddii aad dib uga heli karto xiriirro ka imanaya meelahaas oo leh awood weyn iyo dhagaystayaal ku habboon.
Sida wax kasta oo ka mid ah suuq-geynta suuq-geynta, waxay ku soo degtaa dadka, geeddi-socodka, iyo barnaamijyada. Hubso inaad la shaqeysid la-taliyaha suuqgeynta dijitaalka ah ee fahamsan dhammaan dhinacyada hagaajinta mashiinka raadinta iyo sida ay u saameyn karto booqdayaasha guud ee safarka macaamiisha. Iyo, haddii aad xiiseyneyso inaad hesho gargaar, waxaan ku siiyaa noocyada xirmooyinka ah. Waxay ku bilaabaan lacag bixin bilow ah si ay u daboolaan cilmi baarista - ka dib waxay leeyihiin hawlgal bille ah oo socda si ay kaaga caawiyaan inaad sii wadato hagaajinta.
Kala xiriir Douglas Karr
Tags: maktabaddaistiraatiijiyadda contentdarajo dabiici ahraadinta dabiiciga ahisbeddellada raadinta dabiiciga ahmuuqaalka raadinta dabiiciga ahSEOseo la taliyeseo la talinsocdaalka seoqiimeynta seoqalabka seo